बोर्ड परीक्षालाई लिएर तनावमा हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् । |
बोर्ड परीक्षालाई लिएर तनावमा हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् ।
प्रकाशित मिति :2018-03-20 11:55:20
एजुकेशन न्यूज / परीक्षा भन्ने बित्तिकै धेरै विद्यार्थीको सात्तो जाने गरेको छ । परीक्षालाई सबै विद्यार्थीले एउटै तरिकाले हेर्दैनन् । कोहि विद्यार्थीले परीक्षालाई आफ्नो स्किल मापन गर्ने माध्यम सोच्छन्, कोहिले अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने माध्यमका रुपमा लिन्छन् त कोहिले यसलाई एउटा भारको रुपमा लिन्छन् ।
विद्यार्थीले बोर्ड परीक्षा होस् अथवा विद्यालयको परीक्षा होस्, त्यति धेरै तनाव लिनुपर्ने आवश्यकता छैन । परीक्षालाई आफूले गा¥हो महशुस गरेमा त्यस्तै हुन्छ भने सजिलो महशुस गरेमा सजिलो । हामी यहाँ त्यस्ता केहि उपायहरु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं जस्ले गर्दा बोर्ड परीक्षाको तयारीमा केहि सहज हुन्छ ।
१) भोजनमा ध्यान दिने ः यदि तपाईं आफ्नो परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने खानामा ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ । यदि तपाईंले बाहिरको केहि गलत खानेकुरा खानुभयो भने पढाईमा एकाग्रता हुँदैन । यसकारण आफूले के पढेको छ त्यो कुनैपनि कुरा दिमागमा बस्दैन ।
२) एकाग्रता ः यदि तपाईं पढाईमा एकाग्रता राख्नुहुन्छ भने तपाईंलाई परीक्षामा सफलता प्राप्त हुन्छ । कुनैपनि परीक्षालाई पूरा गर्नका लागि आफ्नो पढाईमा पूर्ण ध्यान दिनु जरुरी छ । जसकारण तपाईं जुन कुरा पढ्नुहुन्छ त्यो कुराहरु याद राख्न सक्नुहुन्छ ।
३) आत्मविश्वास ः आफ्नो आत्मविश्वास कायम गर्नका लागि तपाईंलाई आफ्नो खानपिन सन्तुलित राख्नु जरुरी छ किनभने तपाईंको आत्मविश्वास कुनै यस्तो चिन होइन जस्लाई देख्न सकिन्छ । यो केवल तपाईंको मनोबल शक्तिलाई बढाउने एउटा माध्यम हो । यदि तपाईंको आत्मविश्वास सहि छ भने तपाईंले गरेको कुनैपनि कार्यगलत हुँदैन ।
सबै विकास क्षेत्रको मावि तहको नेपाली विषयको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा सहित
कखरा सिकाउने गीत, हेर्नुहोस लोकभाका यस्तो छ गीत
सबै विकास क्षेत्रको मावि तहको विज्ञान विषयको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा सहित
सबै विकास क्षेत्रको मावि तहको अंग्रेजी विषयको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा सहित
काठमाडौं/१२ चैत– शिक्षा सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको माध्यमिक तहको नेपाली विषयको सबै विकास क्षेत्रको नतिजा
काठमाडाैं, १२ चैत – तपाई बालबालिकालाई अक्षर कसरी चिनाउनुहुन्छ ? कसरी लेख्न लगाउनु हुन्छ ?
परीक्षा तालिका सार्वजनिक, तालिका सहित
कक्षा ११ र १२ को काठमाडौं बाहिरकाे केन्द्र सार्वजनिक, केन्द्र सहित
कलाकार प्रदीप खड्काद्वारा ४५ हजार रुपैयाँ आश्रमलाई सहयोग
केन्याका ताबिजी बने विश्वको उत्कृष्ट शिक्षक, १ मिलियन डलर पुरस्कार पाए
माध्यमिक तहको विभिन्न विषयको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा सहित
कक्षा ११ र १२ काे परीक्षाकेन्द्र सार्वजनिक, हेर्नुहोस
प्याब्सन इलामद्वारा आगलागी पीडित परिवारलाई सहयोग
देश भरि एसईई परीक्षा सुरु
Valley Media Pvt Ltd.
Publisher :- Laxmi prasad Dhakal
Editor :- Kamal Kumar Basnet
Managing Director:- Pushpa Adhikari
Reporter :- Sagoon Thapa , Anish Attit
Marketing Manager :- Binaya Gautam
Marketing Department :-Madhav Panadaye
© 2015.All rights reserved by educationnewsnepal.com
Design by Turup Sangroula